Kuvimbika Kunopa Mubayiro | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 13, 2012 Mugovera, Mbudzi 10, 2012 Douglas Karr
Pandaishanda mupepanhau, ndaigara ndichinzwa sekunge takaita zvinhu kumashure. Isu takapa mavhiki akati wandei epepanhau kune chero nyowani nyowani. Isu tanga tine vanhu vakanyoresa avo vakabhadhara mutengo wakazara wemakumi maviri emakore uye vasina kumbobvira vatambira mutengo kana kana meseji yekutenda… asi isu taizopa mumwe munhu asina kuvimbika kuchiratidzo chedu nemubairo wepakarepo. Zvanga zvisina musoro.
Ndeapi mabhenefiti aanowana ekukurudzira kuvimbika kwevatengi vayo? Uye chii chinotora kukurudzira iko kuvimbika? Mibayiro zvirokwazvo inobatsira, asi zvakanyanya kukosha kutarisa pazvinhu sekupa chigadzirwa chakakura kana sevhisi, uye kuzivikanwa nekuve neyepamusoro-notch sevhisi sevhisi. Zendesk yazvino infographic, Kuvimbika Mibairo, inoratidza kuvimbika kwevatengi kwakakosha kwazvo. 78% yevatengi vakavimbika vanobatsira kutepfenyura iro zita nezve yako mhando, uye 54% havatombo funga kuchinjira kumukwikwidzi.
Tags: kuvimbika kwemutengimutengi mibayirokuvimbikazvirongwa zvekuvimbikamubairo zvirongwamibayiro
Mharidzo: Maitiro Ekuwedzeredza Chiitiko Chako